Merging PA380 VC na A350 jikọrọ ọnụ mkpọ,-ekwe omume?
Merging PA380 VC na A350 jikọrọ ọnụ mkpọ,-ekwe omume? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #481
Nnọọ! Ebudatala m nchịkọta A350 jikọrọ ọnụ ma echere m na ọ bụ A350 kachasị mma ị nwere ike inweta maka FSX ugbu a mana enwere nnukwu nsogbu na ya: ọ ka nwere A320 / A330 dị ka ọkpa ma echere m na ọ ga-ekwe omume ijikọ VC site na Project Airbus A380 n'ụgbọelu a. Ọ bụ ya mere A380 VC n'ihi na ọ bụ nke kacha nso ka m nwere ike inweta (n'ihi na enweghị A350 VCs). Nwere ike ịnyere m aka na nke a? Triednyochala ụfọdụ nkuzi mana n'efu.
Nke a bụ A350 jikọta:
Merging PA380 VC na A350 jikọrọ ọnụ mkpọ,-ekwe omume? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #484
Enwere m ngwa google search dịka m na-eme n'eziokwu n'emeghi nke a, wee bịa na vidiyo a. Echere m na ọ na-enyere aka!
Merging PA380 VC na A350 jikọrọ ọnụ mkpọ,-ekwe omume? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #485
Enweelarịrị m vidio ahụ ma gbalịa ụzọ ndị ahụ mana ọ naghị arụ ọrụ. Ọ bụ ya mere m ji ajụ ebe a.
Ee, abịala m na nkwubi na ọ gaghị ekwe omume. Enyochala m faịlụ na ihe niile dị mkpa ma ọ gaghị ekwe omume ọ bụ ezie na ha bụ MDLXMDLH nke vidio ahụ kwuru mana m nwalere ihe niile ma ọ dịghị onye n'ime ha na-arụ ọrụ ka m wee ghara ịma ihe m ga-eme. Ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ biko biko gwa ebe a.
Oge ike page: 0.307 sekọnd